Xaqiijinta Tayada | DD Fasteners Trading Co., Ltd.
DD FASTENERS waxaa kale oo lagu ansixiyay shahaadada ISO 9001 iyo qaliinka warshadaha ee loo qabtay sida waafaqsan heerka 6S. DD FASTENERS waxay u hoggaansan yihiin labadaba DIN iyo heerarka caalamiga ah, si ay u bixiyaan badeecooyin kala duwan oo buuxa.
Qalabka ka-hortagga-dillaaca ayaa iskaashi la yeeshay tikniyoolajiyadda Jarmalka, ilaalinta deegaanka, ka hortagga acid, qoyaan iyo iska caabbinta kulul, midabada kala duwan, tijaabada cusbada lagu buufiyo ayaa horay loo gaarey 3,000 oo saacadood.
Xajiyeyaasha DD Waxay leedahay syster kontarool otomaatig ah laga bilaabo alaabada ceyriinka ah ilaa alaabada la dhammeeyay oo lagu qalabeeyay qalab tijaabineed oo dhammaystiran.
QOYSKA DD sidoo kale waxay qaadataa booska hogaaminta oo leh qalab si toos ah u wareejiya Vickers, mashiinka qallafiska micro, mashiinka dijitaalka Rockwell, mashiinka tijaabada gantaalka, mashiinka muunad goynta muraayadaha, qashin qubka xawaaraha mashiinka mashiinka, qalabka cabbiro mashiinka, mashiinka tijaabada jiida iyo tijaabada buufinta milixda. qolka iyo mashiinka korontada ku shaqeeya iwm.